ဒါဟာ ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားက မေတ္တာတရားပါပဲ။
ငါတို့တွေ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်နိုင်စွမ်းနည်းခဲ့ကြတယ်။
ဒီအခါ စာပေကောင်းတွေ မင်းများများဖတ်ရှူ့ပါ။
ငါလေးလေးနက်နက် မှာချင်တယ် သူငယ်ချင်း
ဒါပေမယ့် ကိုးကွယ်ခွင့်မရှိဘူး သူငယ်ချင်း
အချစ်ဟာ ငါတို့ကို တစ်ခါတစ်ရံ ကလေးဆန်စေတယ်
ဒါပေမယ့် ငါတို့တွေ အချစ်ကို ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး
မိုက်မဲခွင့် မရှိဘူး သူငယ်ချင်း
တစ်ချိန်မှာ ကံကြုံလို့မဟုတ်ပဲ ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ်။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:40 PM9comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, ကိုယ့်အကြိုက်ကဗျာ
ကိုယ့် ကို ကိုယ် ကလိထိုးရယ်(ရီ)ရတဲ့
ကိုယ်ဟာ အဲဒီအတိတ်ကံလေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂါတ်ကို ဆွဲဆန့်ထားခဲ့ချင်မိတာ
ချစ်သူ လျှောက်မဲ့ ခရီးလမ်းလေးအတွက်
ကိုယ်ဟာ မသေချာမရေရာတဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကလေးဆို
“စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားဆိုတာ ချစ်သူကို
ပျော်ရွှင်စေချင်တာ…သူ့ကို ချစ်တယ်လို့ တစ်ဖွဖွပြောပြီး
ကိုယ့် ကို ကိုယ် ချစ်နေဖို့မှ မဟုတ်ပဲ”
ကိုယ် ခဏခဏ ရွတ်နေမိတယ်
ကိုယ်ဟာ ရိုးသားမိုက်မဲစွာ ချစ်ခဲ့မိတာ
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:37 PM 11 comments: Links to this post
စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဟင်!!!!
စိတ်ကို စိတ်နဲ့လှည့်စားခံရတာ အဆိုးဆုံးပါပဲ။
မိန်းမတို့ရဲ့ ပူဆွေးသောကက နွေမုန်တိုင်းလိုပဲ
ခံစားမူ့ကို လွယ်လင့်တကူ ထုတ်မပြတတ်ဖို့
သမီး နှလုံးသားကတော့ မိန်းမသားဆန်နေခဲ့တယ်။
မေတ္တာဆိုတာ အသွားအပြန် ရှိပေမယ့်
တိုက်ရိုက် အချိုးကျချင်မှ ကျတယ်ဆိုတာ
ဖေဖေ အပြစ်တင်နေမလားဟင် !!!
(Blog ကလည်း မရောက်တာကြာလို့ သစ္စာမရှိတော့ဘူးရယ် :) ....ပုံတင်တာ ဘယ်လိုမှ တင်မရ၀ူး :( :(
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:11 PM9comments: Links to this post
ဟိုဟိုဒီဒီ လမ်းထ လျှောက်မိတယ်
ငါရင်တွေ တဗြောင်းဗြောင်း ပေါက်နေခဲ့တယ်
လေပြည် (၅-၉-၂၀၀၉၊ ည ၁၁း၄၅)
Posted by ခိုင်နုငယ် at 8:18 PM 10 comments: Links to this post
သစ်ခက်အိမ် ( အမှတ်တရဧရာဝတီ...စက်တင်ဘာလ 2011..ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း)
စာမရေးဖြစ်တာ အတော့်ကိုကြာနေခဲ့ပါပြီ။ အလုပ်အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်
စာရေးချင်တဲ့အခါ မှတ်စုစာအုပ်လေးထဲမှာပဲ ရေးခြစ်မှတ်သားထားခဲ့ရပါတယ်။
အရောက်လာ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတွေ အတွက် ဘလောပ့်ပေါ် ပိုစ့်အသစ် မတင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့
ပေမယ့် ဒီနေ့ဧရာဝတီကို ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိခင် ဧရာဝတီအတွက် ဆောင်းပါး
ပိုစ့်ရည်ရွယ်ရေးသားထားပေမယ့် တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ မိခင် ဧရာဝတီအတွက် တာဝန်မကျေသလို
ခံစားနေရချိန်မှာ မနက်ပိုင်းက ဆရာသစ်ခက်အိမ်ရဲ့ ကဗျာလေးဖတ်မိရင်း အထူးကြိုက်နှစ်သက်မိ
ရလို့ဆရာ့ဇနီး မဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) ဆီကနေခွင့်ပြုတောင်းယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
“မိခင် ဧရာဝတီ အတွက်”
“ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်ပါတယ်”
Posted by ခိုင်နုငယ် at 11:55 PM 16 comments: Links to this post
Labels: ကိုယ့်အကြိုက်ကဗျာ, ဧရာဝတီ
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:45 PM 15 comments: Links to this post